Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguManuela
Kwigadi enkulu, ezele zii-hammocks, phantsi kweepinos ezintathu, indlu ethe cwaka yabucala ye-apulian enegumbi elikhulu lokulala, ikhitshi elixhotyisiweyo kunye neConservatory "enendawo yomlilo" umbono omhlophe kwindawo yangaphandle. Ifanitshala enesitayile. Delicius ngaphakathi egadini isidlo sakusasa kunye nenkampani eyonwabileyo yeekati nezinja.
Matera yimizuzu engama-40 kuphela kude. Ukuba uceba ukutyelela i-European Capital yeNkcubeko ngendlela ekhethekileyo, silapha.
Ukuhlala ngokugqibeleleyo kuhambo oluhle ukuya elwandle okanye eAlberobello, ePolignano, eMonopoli.
Relax, cwaka, isandi seqakamba elangeni naphantsi kwesibhakabhaka esizele ziinkwenkwezi. Indawo enoxolo, kwisitayile se-apulian eyiyo ehonjiswe yindlu entle. Unokuthenga imifuno kwi-organic "potager" yethu. Unokuhlala ngaphandle, kwigadi enkulu okanye kwigadi engaphakathi, isidlo sakusasa okanye isidlo sangokuhlwa okanye ukuphumla okuthe cwaka. IiHammocks kuyo yonke indawo kwigadi enkulu ukuze uphumle.
Ibhafu yenzelwe wena (ixabiso elongezelelweyo kwaye uyigcine ubuncinane ngosuku olungaphambili). Ibhedi yomntu wesithathu kwigumbi lokulala.
4.78 · Izimvo eziyi-90
Sikufuphi neForesta di Mercadante kwaye kwisiqingatha seyure ufumana iMatera kunye ne 'Sassi' yakhe, iGravina kunye nesixeko esingaphantsi komhlaba, zombini phantsi kwewaranti ye-Unesco, iAltamura, isixeko esimnandi sothando, umhlaba waseFederico il Secondo. I-Romanica Bari kunye ne 'lungomare' e borgo antico yakhe zikude kuphela iikhilomitha ezingama-30. I-Trani kufuphi ne-40km. Ukuya ePolignano, eMonopoli, gli scavi archeologici di Egnazia udinga iyure eyi-1 kuphela.
Sithetha isiNgesi, isiFrentshi nesiRashiya. Singabamkeli abanobubele kwaye siyathanda amava otshintshiselwano nabantu.
Inombolo yomthetho: BA07201662000014712